जोड र घटाऊहरु – NepalayaNews.com
शृङ्खला सूत्र १९ आश्विन २०७२, मंगलवार ०५:५९
ऐतिहाँसिक गुजारावाद १९ श्रावण २०७२, मंगलवार १५:३२
गनेस पौडेल । कहिलेकाँही यसो विचार गर्छु ः नेपालको राष्ट्रिय मनोविज्ञानको स्टिमुली तन्तु के होला ? म मनोविज्ञानकै विद्यार्थी त होइन तैपनि किन हो मलाई आफू सम्मिलित यो देशको मनोविज्ञान नै कुनै न कुनै हदमा हाम्रो अविकासको कडी हो जस्तो लाग्छ । हाम्रो विचार, संस्कृति र..
मेरो जिन्दगी मेरो मर्जी ५ श्रावण २०७२, मंगलवार १६:०२
गनेस पौडेल । केटाकेटीमा एउटा कविता पढ्नुपथ्र्यो विलियम वर्डस्वर्थको ‘आई वान्डर्ड लोन्ली याज द क्लाउड’ । ड्याफोडिल अर्थात पहेँलो जातको नर्गिसको फूलको सुन्दरता मात्रै हेरेर बस्न पनि मान्छेको चोला कति छोटो छ ? स्वच्छन्दता र प्रकृतिप्रेमका लागि संसारप्रसिद्ध कवि..
प्रेम मर्दैन, मार्नु पर्छ १ असार २०७२, मंगलवार ०५:४३
गनेस पौडेल प्रिय विपश्वी, तिमीले सुनेका छौ, नारायण गोपालको एउटा गीत ? ‘एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पार्दछ जिन्दगीमा...।’ प्रश्न सोध्ने मूर्ख हुँ । यो गीत नसुन्ने को होला ? तर सर्वाधिक डरलाग्ने गीत हो यो मलाई । जब जिन्दगी जस्तो विशाल कुरालाई एउटा, मात्र एउटा..
सुको अर्थात चिडीको एक्का १९ जेष्ठ २०७२, मंगलवार १७:१८
गनेस पौडेल पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको एउटा कृति छ, ‘बाह्रौं खेलाडी’ । बेन्चमा बसेर मैदानका खेलाडी कतिबेला अक्षम होलान्, थाक्लान् वा घाइते होलान् र भित्र पसुँला भनेर चुइँगम चापाएर तम्तयार बस्ने खेलाडी हो बाह्रौं खेलाडी । यो हो फुटबलको कुरा ।..
आपतको परिचय ५ जेष्ठ २०७२, मंगलवार १३:२२
– गनेस पौडेल भैंचालोले नेपालको जमिन जति हल्लिएको छ, उत्तिकै हल्लिएका छन् मान्छेका परिचय पनि । विपत्तिहरु मान्छेका परिचय निखारिने समय हुन् । यो विपदको बेलामा देखिएका मान्छेका केही सार असार परिचयहरु छन् जसले मलाई जीवनभर हल्लाइ रहने छ । मेरो गाउँका एकजना कार्की..
कम्पानुभूति २२ बैशाख २०७२, मंगलवार १४:३१
– गनेस पौडल अमेरिकी महादेशको उत्तराखण्डमा बसोबास गरिरहेको मित्र अमित रिजालको ग्रुप म्यासेज आयो । नुवाकोटको जुँगेटारी स्थित उसको घर पुरै ध्वस्त छ । आमा, सुत्केरी बहिनी, भान्जी र हजुरआमा जेनतेन सकुशल छन् तर सानीआमालाई भने भुकम्पले खायो । । विदूर नगरपालिकाको..
परिवर्तन असत्य हो ९ बैशाख २०७२, बुधबार १५:२२
परिवर्तन असत्य हो (नथिङ चेन्जेज, एभ्रिथिङ इज कन्स्ट्यान्ट) – गनेस पौडेल परिवर्तन के हो ? उफ् ! आज एकाबिहानै बिस्ताराबाट नउठ्दै मेरो दिमागका आयो । साँच्चै परिवर्तन के हो ? ‘नो म्यान इभर स्टेप्स् इन त सेम रिभर ट्वाइस्,’ हेराक्लिटसले भनेको पुरानो वाक्य सम्झिएँ । थपेर..
पैंताला दर्शन २२ चैत्र २०७१, आईतवार १६:३७
— गनेस पौडेल प्रिय विपश्वी, अघिल्लो चिठी लामो भएर रिसाएछौ । यो छोटो चिठीमा म समग्र दर्शन इतिहास भन्छु । योचाँहि छोटो हुने पक्का छ किन कि हाम्रो सभ्यताको पूरा कथा हाम्रो ज्यानभन्दा पनि ठूलो छैन । हाम्रो शरीर जत्रै मात्रै छ । टाउको दर्शन एक जमानामा मान्छेलाई जीवनका र..
पैंताला दर्शन २२ चैत्र २०७१, आईतवार १६:१५
विद्यार्थीबाट व्यवसायमा फड्को मार्दै एनआरएनतिर १९ आश्विन २०७२, मंगलवार ०५:५९
एमाजनको २ अर्ब डलर बराबरको शेयर बिक्री १९ आश्विन २०७२, मंगलवार ०५:५९
कोभिड विरोधी खोपमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार छूट दिने अवधारणाको समर्थनमा अमेरिका १९ आश्विन २०७२, मंगलवार ०५:५९